Horudhac: Hungary vs France… (Les Bleus oo soo raaci kara xulalka usoo gudbay wareegga 16-ka ee tartanka Euro 2020) – Gool FM
Horudhac: Hungary vs France… (Les Bleus oo soo raaci kara xulalka usoo gudbay wareegga 16-ka ee tartanka Euro 2020)
Ahmed Nur June 19, 2021
(Budapest) 19 Juun 2021. Xulka qaranka dalka Faransiiska ayaa heysta fursad weyn oo ku aaddan inuu xaqiijiyo booskiisa wareegga 16-ka ee tartanka qarammada qaaradda Yurub marka caawa xulka Hungary ay kula ciyaaraan dalkiisa.
France ayaa heysta guul uu ciyaartii koowaad ee guruubkan F ka gaaray xulka Germany, waxaana haddii uu caawa guul gaaro uu xaqiijin doonaa inuu usoo gudbay wareegga bug-baxda ee tartanka Euro 2020.
Xulka France ayaa go’aan ka gaari doono inuu kulankan kusoo bilawdo xiddiga difaaca ka ciyaara ee Benjamin Pavard ciyaartii Jarmalka inkastoo uu dhammeystay kulankaas.
Geesta kale, xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Daniel Gazdag ayaa laga saaray safka xulka qaranka Hungary kaddib dhaawac kasoo gaaray jilibka, halka xiddigaha kala ah Willi Orban iyo Loic Nego ay hal jaalle u jiraan inay ganaax la kulmaan.
Xulka France ayaa garaacay dhiggiisa Hungary labadii kulan ee ay tartan weyn isaga hor imaadeen, waxayna ahaayeen Koobka Adduunka sanadkii 1978 (3-1) iyo Koobka Adduunka sanadkii 1986 (3-0), labaad kulanna waxay ka tirsanaayeen wareegga guruubyada.
Faransiiska ayaa guuleystay shantii jeer ee ugu dambeysay oo ay labadan xul wada ciyaareen iyadoo xiddigahiisa ay dhaliyeen kulammadaas 12 gool halka iyagana laga dhaliyay saddex gool oo qura, balse France kaliya saddex guul ayuu ka gaaray Hungary 17-kii ciyaarood ee ka horreeyay shantaan ciyaarood, 12 jeer isagaa la garaacay halka labo barbarro uu helay.
Xiddigaha France ayaa gaaray kaliya hal guul siddeed kulan oo ay kusoo ciyaareen carrada dalka Hungary, hal barbarro oo qura ayuu galay lix jeerna waa la garaacay kulammadaas, ciyaarta ay guusha gaareen waxaa labo gool u dhaliyay Eric Cantona kulan ku dhammaaday 3-1 oo sanadkii 1990 ka dhacay magaalada Budapest oo caawa kulankan lagu dheeli doono.
Guuldarradii Hungary kasoo gaartay xulka Portugal ciyaartoodii koowaad ee Euro 2020 ayaa soo gabo-gabeysay 11 kulan oo ay guuldarro la’aan ahaayeen.
Markii ugu dambeysay ee xulka Hungary la garaaco labada kulan ee ugu horreysa tartan weyn waxay ahayd Koobkii Adduunka ee 1978.
Hungary waa guul la’aan afartii ciyaarood ee ugu dambeysay tartanka qarammada qaaradda Yurub isagoo la garaacay labo jeer, labada kalena barbarro ayuu galay, waxaana laga dhaliyay ugu yaraan saddex gool saddexdii ciyaarood ee lasoo dhaafay.
Xiddiga Hungary khadka dhexe kaga ciyaara ee Loic Nego ayaa ku dhashay dalka Faransiiska, waxaana uu xulka France ee xiddigaha dhallinta yar uu kula guuleystay koobka qarammada qaaradda Yurub ee xiddigaha da’dooda ka hooseyso 19-sano jirrada sanadkii 2010, waxayna iska garaab ciyaarayeen Antoine Griezmann oo caawa Faransiiska matalaya.
Xulka Faransiiska ayaa guuleystay dhammaan shantii kulan ee ugu dambeysay tartammada oo dhan iyadoo aanan waliba wax gool ah laga dhalin.
Ma aysan adkaan lix kulan oo isku xigta tan iyo June 2016 xilligaas oo labada kulan ee ugu dambeysay lixda ciyaarood ay ahaayeen labada ciyaar ee ugu horreysa tartanka Euro 2016.
Markii ugu dambeysay oo ay lix kulan isku xigta shabaqooda gool ka difaacaan ay ahayd sanadkii 2017, waxaana markaas macallin u ahaa Raymond Domenech.
Horudhac: Portugal vs Germany... (Cristiano Ronaldo iyo Thomas Muller oo mid walba laga sugayo inuu iska baabi'iyo rikoor liita ciyaarta caawa)